Skotisma Iraisam-pirenena - Tily eto Madagasikara
Maniry handray anjara amin’ny hetsika iraisam-pirenena aho
Ny Skotisma dia iray amin’ireo fikambanana lehibe indrindra maneran-tany mampivondrona ny tanora avy amin’ny firenena miisa 171 mpikambana ao amin’ny OMMS.54 tapitr’isa no isan’ny mpikambana maneran-tany ankehitriny, ary isan’izany isika eto Madagasikara. Ankoatra ireo hetsika nasionaly dia afaka mandray anjara amin’ ireo hetsika iraisam-pirenena ihany koa ise. Hitan’ise ato ny lisitr’ireo hetsika iraisam-pirenena rehetra voalahatra […]
Raha miresaka ny Skotisma eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena dia ny Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) no resahana amin’izany. Manana ny rafitra ijoroany izy. Ao ny Conférence Mondiale ivondronan’ireo firenena 171 mpikambana maneran-tany mivory isaky ny telo taona. Io no rafitra fara-tampony manapaka ny vina sy politika ankapobeny hirosoan’ny skotisma. Misy koa ny Comité Mondiale […]